AVI files yihiin files caadi ah in aad soo aragtay ama ay leeyihiin waxa on your computer. Tani Audio Video daraa (AVI) waa qaab multimedia weelka ka kooban labada files audio xogta iyo video. Microsoft horumariyo noocan oo kale ah qaab faylka sida dastuurka ka mid ah Video nidaamka hawlgalka daaqadaha. The dejinayo file AVI uusan kaliya aan oggolaan inaad sii qulquli videos iyo Cajalado online laakiin sidoo kale Cajalado synchronous la video loo maqli karo. Oo weliba waxay fududaysaa in aad ciyaaro heerka videos qeexidda on your computer. Mid ka mid ah feature aad u fiican oo ku saabsan qaabka weelka tani waa in ay ka ciyaari kara DVD qaab video. AVI qaab video jaanqaadi VLC Media Player, ciyaaryahanka KM iyo sidoo kale MPlayer.
Qeybta 1: Play .avi Videos warbaahinta VLC Player On Windows
Qeybta 2: Play .avi Videos warbaahinta VLC Player On Mac
Lahaanshaha noocan oo kale ah file ah, sidee ayaad u ciyaaro aad VLC? Qaado safar gaaban oo raac tallaabooyinkan. Haddii aad isticmaalayso nidaam ka hawlgala daaqadaha ka dibna yeeshaan.
1 Download ciyaaryahanka warbaahinta VLC
Ururka VideoLan ka dhigay codsigan laga heli karaa internetka oo aad ka site VLC ku soo bixi kartaa. Dooro nooca ugu dambeeya waa in la jaan qaada your computer. Wixii kiiskan soo bixi version daaqadaha iyo rakibi aad kombuutarka.
2 fur files AVI ku software
On my computer, doorato qaabka .avi video in aad rabto in aad ka ciyaaro ka dibna midig u guji on. Hoos dhibic A ka muuqan doontaa in ay garab midig ama bidix. Markaas dul istaagin dulqabo iyo guji Open leh. Oo halkaasaannu ka dul istaagin dulqabo iyo guji icon VLC ka fursadaha.
3 Play files AVI ku VLC
Marka aad gujisid Open la VLC, video si toos ah ciyaari doonaa warbaahinta VLC ah. Laga soo bilaabo waxaa aad samayn kartaa qabsiga on mugga, muuqa nuur iyo kordhiyo shaashadda si ay ugu raaxaystaan ​​daawashada video ah.
Qeybta 2: Play .avi Videos warbaahinta VLC Player Mac
Dadka isticmaala Mac aad weli ciyaari karo AVI files on VLC ciyaaryahan warbaahinta u Mac. Ciyaaryahanka Tani waa lagu kalsoonaan karo tan iyo markii aad maamuli kartaa playlist oo waxaad ka samaysaa hagaajin on mugga iyo duwan. Si aad u ciyaaro faylka wax .avi video aad u baahan tahay in la sameeyo soo socda.
1 Download VLC Media Player u Mac.
The horeeyo ee la sameeyo waa inaad kala soo baxdo ciyaaryahanka warbaahinta VLC u Mac oo ku xidh sax on your computer. Codsigan waa iska diyaar online.
2 fur faylka la doonayo arjiga
Ka dib markii ay soo degsado ciyaaryahan warbaahinta u furo on your computer. Ugu menu click ugu weyn ee File, hoos u soo dejiyey menu arbushin doonaa. Oo halkaasaannu ka maraan dulqabo iyo guji Open.
Waxay kuu tilmaami doona meesha videos kaydsan iyo files. Doondoon, oo guji video avi aad rabto in aad ka ciyaari. Waxaad kale oo jiidi karaan video AVI in ay VLC si ay u ciyaaro.
3 ciyaari video AVI ah
Hadda riix Open kadib markii doorashada video AVI ah. Tani waxay si toos ah u ciyaari doonaa video ku saabsan media player VLC.
Mararka files AVI ka dhici karta in uu ciyaaro warbaahinta VLC ciyaaryahanka aad iskugu sheegay bixi. Ha uga xumaaday tan iyo markii Wondershare Video Converter Ultimate u ciyaari doono.
Codsigan waa ka duwan sida ugu fiican ee VLC tan iyo markii ay taageertaa qaabab badan oo ay ka mid yihiin files files AVI. Download waa ha la saaray.
> Resource > VLC > Sida loo Play .avi Videos warbaahinta VLC Player?